Archive du 20170210
Praiminisitra vaovao Tsara toerana i Tazafy Armand
Loharanom-baovao vitsivitsy akaikin�ny mpitondra fanjakana ankehitriny no nahafantarana fa na tsy hisy aza ny fanovana governemanta ato ho ato dia manam-paniriana mafy ny hanolo praiminisitra ny filoha Hery Rajaonarimampianina.
Raharaham-pirenena Manahy hatezeram-bahoaka ny DFP
Sady mbola velona no mivelatra araka ny tokony ho izy ny Dinika Fanavotam-Pirenena (DFP), hoy ny filohany, Tolojanahary Maharavo na Doudou.
Fandraisana mpiasam-panjakana 13 000 Ahiana hanjakan'ny kolikoly
Mpiasam-panjakana manodidina ny 13 000 no fantatra fa horaisina ato ho ato. Amin'ny ankapobeny dia amin'ny alalan'ny fanadinana fifaninanana no handraisana ireny mpiasam-panjakana vao hampidiririna ireny.
Senatera Berthin Andriamihaingo Mazoto amin�ny fanampiana ny tanora Malagasy
Anisan�ireo olona mitana andraikitra ambony eto amin�ny firenena tsy mba tia miresaka firy rahaharaha politika ny Senateran�i Madagasikara, Berthin Andriamihaingo avy eny Atsimondrano.
Fifidianana filoha � 2018 Ahiana hampikorontana indray
Manindry mafy ny hamelana malalaka ireo kandida rehetra mba hirotsaka amin�ny fifidianana filoham-pirenena manaraka eo ny mpiara-miombon�antoka sy mpiara-miasa amin�i Madagasikara hatramin�ny enim-bolana faharoan�ny 2016 no ho mankaty.
Rajaonarimampianina Propagandy no mahamaika azy
Sesilany ny olana eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Zara raha mandeha ora vitsy isan'andro ny herinaratry ny jirama. Mandindona andro aman'alina ny fiakaran'ny vidin-tsolika.
Antoko TIM Tafatsangana ny DISTIM Toliara I sy Benenitra
Tafatsangana ny sabotsy 4 febroary teo ny Distim vaovao ao Toliara I tarihan�Atoa Mosa sy ny any Benenitra tarihan�Atoa Herv�.
Taratasin�i Jean Aiza ianao e ?
O ry Jean o ! Aiza ianao fa miandry anao ny firenena e ! Tsy misy biby mandeha tsy misy lohany izany anie e ! Sao dia izahay indray no hanilihanao andraikitra eto.
Tetikasa "Vehivavy mizaka tena ara-toekarena" Hahazo 20 tapitrisa Ar ny mendrika
Mivelatra amin'ny lafivalon'ny Nosy ny fifaninanana mamorona tetikasa mifandraika amin'ny fampiroboroboana sy ny fandraisan'andraikitry ny vehivavy nampisalorana ny lohahevitra hoe "Vehivavy mizaka tena ara-toekarena",
Firosoana amin�ny mangarahara Tsy rototra ny fitondrana
Na dia mitsikera aza ny sehatra iraisam-pirenena fa taraiky 20 taona amin�ny lafiny fampandrosoana isika ary anisan�ny antony lehibe mahatonga izany ny firongatry ny
Fampiakaran-karama 7% �Maneso ny mpiasam-panjakana�, hoy i Beanjara Paul
Maneso ny mpiasam-panjakana ny fanondratana 7% ny karama, hoy ny antoko SFDM (Sehatra Fampandrosoana ny Demokrasia eto Madagasikara), anisan�ny mpikambana ao anatin�ny sendikan�ny mpiasam-panjakana.
Andoharanofotsy Nanapoaka basy ny mpiambina ny zanaky ny filoha
Somary nanaitra ny nandre fipoahana teny Andoharanofotsy manakaiky ny IT University teny halina tokony ho tamin�ny 9 ora teo,na dia tsy nirefotra be aza dia azo antoka fa fipoahana basy ilay izy hoy ireo nandre ny zava-niseho
FIKAMBANANA MADAGASIKARA NOSY MIAVAKA Ozon-drazana no mampahantra ny Malagasy
Ozon-drazana no mampahantra antsika Malagasy tahaka izao ho an�ny fikambanana Madagasikara Nosy Miavaka izay misy ny fivavahana Hebreo Notsrym voalaza fa fototry ny fivavahana voalohany ao anaty Baiboly.